people Nepal » आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल आषाढ ८ गते बिही आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल आषाढ ८ गते बिही – people Nepal
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल आषाढ ८ गते बिही
Posted on June 22, 2017 June 22, 2017 by Durga Panta
आज श्री शाके १९३९, वि.सं. २०७४ साल आषाढ ८ गते बिहीबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ जुन २२ तारीख, आषाढ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथी १३ः४६ बजे सम्म पश्चात चतुर्दशी तिथी चन्दमा बृष राशिमा सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, भूमिरज दिलाचह्रे पूजा
वाणीका कारण समाजीक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व बढ्नेछ । सामान्य यात्रा पश्चात भोजभतेरमा सरीक हुने अवसर जुट्रनेछ । पारीवारिक झोरझमेलाले भने सताउन सक्नेछ । पठनपाठनका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु उत्तम रहनेछ । शारीरिक अस्वस्थाका कारण कार्य क्षेत्रमा प्रयाप्त समय दिन नसकिएला ।
आफ्नो कार्य शैलिले अन्य ब्यक्तिहरुलाई आकर्शित गराउन सकिनेछ साथै कार्य क्षेत्रको लगन सिलतामा बृद्यि हुने समय रहेको छ । सबारी साधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ । आफुभन्दा साना तथा जिबन साथीको सहयोमा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ उठाउन सकिने समय रहेको छ ।
स्वास्थ सम्बन्धि समस्याका कारण सामान्य खर्च तथा आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्न सक्नेछ । आत्मीय ब्यक्तिसगँको साथ छुट्रन सक्नेछ । बोलिको गलत अर्थ लगाउन प्रतिपक्क्षीहरु तत्पर रहेकाले सजग रहनु उत्तम रहनेछ । साजेदारी तथा नयाँ लगानिका क्षेत्रमा साबधान रहनु होला ।
आर्थीक बिकाशका लागी स्थाई क्षेत्रमा लगानि लगाउन उत्तम समय रहेको छ । अल्झिएर रहेका कार्यहरु सुचारु गर्न तथा साजेदारी कार्यहरु बाट लाभ प्रात्त हुने योग परेको छ । मनोरञ्जनको अवसर प्राप्त रहेतापनि प्रयात्त समय जुटाउन झन्झटको सामना गर्नु पर्नेछ । शत्रु परास्त्र हुनेछन् ।
पारीरिवारिक साथ सहयोग द्वारा सामाजिक कार्य मार्फत सामान्य मानसम्मानको योग प्राप्त भएता पनि मानसिक सन्तुष्टी भने प्राप्त नहुन सक्ला । आफु द्वारा गरीएको लगानिको स्वयमले यथेष्ट लाभ लिन नसक्नाले कार्य प्रतिको लगन सिलतामा कमि आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
अन्य द्वारा आर्जित सम्पति भोग चलनको अवसर जुटेतापनि स्वयम द्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय अरुलाई मिल्नेछ । तपाईको कार्यमा खोट देखाउने ब्यत्तित्व हरुको कमि नरहला । अकल्पनिय यात्राको सम्भाबना रहेको छ । मित्रजन तथा दाजुभाई हरुको साथ सहयोगमा बृद्यि हुनाले कार्य सम्पादनमा मद्दत मिल्नेछ ।
स्थान परीवर्तनको सम्भावना रहेको छ । सबारीसाधन तथा यात्रामा बिशेष साबधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ अन्यथा सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेको छ । बाणी तथा कार्य सम्पादनको त्रुटीले सामान्य बाद बिवादको झमेलामा फसिएला । गैर ब्यक्ति हरुको पुर्ण रुपमा बिश्वासमा नपर्नु होला ।
आत्मबिश्वामा बृद्यि हुनाले कार्य सम्पादनमा सहजता प्राप्त हुनेछ । अनावश्यक कोधको बशमा परिन सक्ने सम्भावना रहेकोछ । जिवन साथिको साथ सहयोगमा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ उठाउन सफल रहिनेछ । साजेदारी कार्यका क्षेत्रमा भने सजग रहनु उत्तम रहनेछ ।
कार्यसम्पादनमा रहेका अनेक द्वुबिधाहरु निर्मुल भएर जानेछन । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा अब्बल स्थान हासिल हुनेछ । सामान्य रोगबाट छुट्कारा समेत प्राप्त हुन सक्नेछ । पारीवारिक सम्बन्धमा भने सामान्य समस्या आईपर्न सक्नेछ । शुभचिन्तक हरुको साथ सहयोगमा बृद्यि हुनेछ ।
कार्य क्षेत्रमा दृढ रहदा रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट आफुलाई प्रस्फुटन गर्ने मनग्य अवसरहरु जुट्नेछन । आफुभन्दा साना तथा जिबन साथीको सहयोमा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ उठाउन सकिने समय रहेको छ । नयाँ लगानि लगाउन उत्तम समय रहेको छ ।
कार्य सम्पादनमा मानसिक चन्चलताको असर देखा पर्न सक्नेछ । प्रिय ब्यत्तिहरु सगँको साथ सहयोगमा कमि महसुस हुन सक्नेछ । मातृपक्क्षका ब्यत्तिहरुको स्बास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । साधारण सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ । आम्दनी बृद्वि हुने योग रहेको छ ।
पराक्रममा बृद्यि हुनेछ । यात्रा मनोरञ्जन पुर्ण ब्यतित रहने सम्भाबना रहेको छ । मित्रजन तथा दाजुभाई हरुको साथ सहयोगमा बृद्यि हुनाले कार्य सम्पादनमा मद्दत मिल्नेछ । आत्मबिश्वामा बृद्यि हुनाले कार्य सम्पादनमा सहजता प्राप्त रहनेछ । पुरानो लगानि उठाउन समयले बिशेष साथ दिनेछ ।